検索キーワード：(著者名に左の語を含む: #Ññvanʿʹ Haṃ Krū to)
ပင်းယ၊ အင်းဝခေတ် မြန်မာစာပေ / ထန်လှိုင် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
[ရန်ကုန်] : စာပေဗိမာန် , 2006. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
ရှေးဟောင်းမြန်မာ့အိုးမြို့တော် / ထန်လှိုင် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
[ရန်ကုန်] : ဒေါ်မြမြ , 2001. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
မြန်မာ့ရုပ်တုယဉ်ကျေးမှု / မောင်ယဉ်လှိုင် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
ဆိုကရေးတီး ခရီးမှတ်တိုင်များ / ဇင်မင်း ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး၏ ဟံသာဝတီခေတ်ယဉ်ကျေးမှု / မောင်ယဉ်လှိုင်း ; စီစဉတည်းဖြတ်သူ ဦးညွန်ဟံ
ရန်ကုန် : စာပေဗိမာန် , 2007. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
မပြတ်တွေ့နိုင်သည့် ဖိနပ်ဓလေ့ / ထန်လှိုင် ; စာစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
မြတ်ပန်တော်ပန်း ခိုင်လုံးလန်း / သိန်းသန်းဝင်း ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
ပုဂံခေတ်လူမှုရေးရာ အနုပညာကောက်ကြောင်း / မောင်ကြည်ပန်း ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
[ရန်ကုန်] : စာပေဗိမာန် , 2004. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
မြန်မာ့ဓမ္မသတ်သမိုင်း = History of Myanmar dhammasats / ဦးအောင်သန်းထွန်း ; တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
1 တွဲ,2 တွဲ,3 တွဲ. - [ရန်ကုန်] : စာပေဗိမာန် , 2005-2007. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
ကယန်း (ပဒေါင်) / သျှင်ထွေးယဉ် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
[ရန်ကုန်] : စာပေဗိမာန် , 2005. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
မေယုတောင်စွယ်ကြားမှ သွေးချင်းမောင်မယ်များ / သျှင်ထွေးယဉ် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ
အခြေခံပြတိုက်ပညာ နှင့် ပြတိုက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းပညာ = Manual of fundamental museology and museography / ဘတင့် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
ကြေးသွန်း ကြေးခတ် ပန်းတဉ်းအတတ် / အောင်ငြိမ်းချမ်း ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
ရှေးဟောင်း ဆီဆေး ပန်းချီကားများ လက်တွေ့ထိန်းသိမ်းမှုပညာ / ဘတင့် ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဦးစန်းတင့်
[ရန်ကုန်] : စာပေဗိမာန် , 2002. - (စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်)
မြန်မာ့ရိုးရာ ဓနိလုပ်ငန်း / ခင်မိုးအေး ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
မြန်မာ့ရိုးရာ ပြာသာဒ် / မောင်ယဉ်လှိုင်း ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဦးစန်းတင့်
မန်လည်စာဆိုတော် / နီငြိမ်း ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဦးညွန့်ဟံ, ဒေါ်တင်တင်ဝင်း
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ရက်စဉ်သမိုင်း / ဖိုးအောင်လေး ; [edited by ] ဦးညွန့်ဟံ, ဦးစန်းတင့်
သမိုင်းထဲက တကောင်း / မောင်ချစ်ထွေး ; စီစဉ်တည်းဖြတ်သူ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း, ဦးညွန့်ဟံ